ရွှေဝတ်စုံဝတ်တာ တောဆန်တယ်ပြောလို့ ပြန်ရှင်းလိုက်တဲ့ မန်းလေး ဝိန့်စိန်သမီးလေး – Alinyaung
ရွှေဝတ်စုံဝတ်တာ တောဆန်တယ်ပြောလို့ ပြန်ရှင်းလိုက်တဲ့ မန်းလေး ဝိန့်စိန်သမီးလေး
December 7, 2017 ErhekjqGPBzWQaQNQM News 0
ရွှေဝတ်စုံဝတ်ကြတာ ဝါဝါဝင်းဝင်းကြီး တောဆန်တယ်ပြောကြလွန်းလို့ ကျက်သရေတိုးအောင် ဝတ်ပြလိုက်တာပါဆိုပြီး ရွှေဝတ်စုံအကြောင်း ပြောပြလိုက်တဲ့ မန်းလေးဝန့်စိန်သမီးလေး
ရွှေဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီး မင်္ဂလာဆောင်ရတဲ့ အကြောင်းပြောပြလိုက်တဲ့ ရွှေ ၃ ပိဿာဝတ်စုံနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့သော မန်းလေး ဝိန့်စိန်သမီးလေး
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာလက ဒီဝိန့်စိန်သမီးလေး မင်္ဂဆောင်မှာ သတို့သမီး ဝတ်စုံက ရွှေ ၃ ပိဿာနဲ့ ဖန်တီးထားလို့ မီဒီယာတွေကြားမှာ ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ အချို့ကလည်း အားကျသူ ရှိကြသလို အချိုကလည်း မလိုအပ်ပါဘူး ဆိုပြီး ဝေဖန်ကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးဒီနေ့ သူမရဲ့ Facebook ကနေ ရွှေဝတ်စုံဝတ်ရတဲ့ အကြောင်းကို ဒီလို ရှင်းပြထားပါတယ်။
ရွှေဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီး မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ရှင်းရှင်းလေးပါ ။ မိဘလုပ်ငန်းက ရွှေဆိုင်ဖြစ်လို့ အင်္ကျီပေါ်မှာ ရွှေဆင်ဝတ်နိုင်တာ မဆန်းပါဘူး ။ ကြွားစရာလည်းမလိုဘူး ။ရွှေဆိုတာ ၁ ခါသုံးမှမဟုတ်ဘဲ ။ ပြန်ကျိုပြီး ပစ္စည်းပြန်ခက်လို့ရတဲ့ ရတနာပစ္စည်းပါ ။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က အထူးသဖြင့်မြို့ပေါ်ကလူတွေက ရွှေဆိုရင် နယ်ကလူတွေဝတ်တာ ၊ ဝါဝါဝင်းဝင်းကြီး တောဆန်တယ်လို့ပြောကြလွန်းလို့ ရွှေဆိုတာ တကယ်ဖန်တီးဝတ်ဆင်တတ်ရင် ဘယ်လောက်ထိအောင် လှပြီးကျက်သရေတိုးစေကြောင်း သက်သေပြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါ ။
တကယ်တော့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ အသားရေက ရွှေနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးပါ ။ ကိုယ့်အသားရောင်တောင် ရွှေရောင်အသားရေလို့တင်စားတတ်ကြတာမဟုတ်လား ? ပြီးတော့ရွှေဆိုတာ မြင်နေကျ ဆွဲကြိုးကြီးကြီးတွေ လက်ကောက်အကြီးကြီးတွေပဲလုပ်ဝတ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး ။လက်မှု့ပညာထွန်းကားလှတဲ့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံကပန်းတိမ်နဲ့ပန်းပုပညာရှင်တွေက ရွှေကိုအများနဲ့မတူ တမူထူးခြားအောင် အနု့စိတ်ပုံဖော်နိုင်တယ်ဆိုတာ ပြသချင်တာပါ
ရှဝေတျစုံဝတျကွတာ ဝါဝါဝငျးဝငျးကွီး တောဆနျတယျပွောကွလှနျးလို့ ကကျြသရတေိုးအောငျ ဝတျပွလိုကျတာပါဆိုပွီး ရှဝေတျစုံအကွောငျး ပွောပွလိုကျတဲ့ မနျးလေးဝနျ့စိနျသမီးလေး
ရှဝေတျစုံတှဝေတျပွီး မင်ျဂလာဆောငျရတဲ့ အကွောငျးပွောပွလိုကျတဲ့ ရှေ ၃ ပိဿာဝတျစုံနဲ့ မင်ျဂလာဆောငျခဲ့သော မနျးလေး ဝိနျ့စိနျသမီးလေး
ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ နိုဝငျဘာလက ဒီဝိနျ့စိနျသမီးလေး မင်ျဂဆောငျမှာ သတို့သမီး ဝတျစုံက ရှေ ၃ ပိဿာနဲ့ ဖနျတီးထားလို့ မီဒီယာတှကွေားမှာ ရပေနျးစားခဲ့ပါတယျ။ အခြို့ကလညျး အားကသြူ ရှိကွသလို အခြိုကလညျး မလိုအပျပါဘူး ဆိုပွီး ဝဖေနျကွပါတယျ။ ဒါနဲ့ ပတျသတျပွီးဒီနေ့ သူမရဲ့ Facebook ကနေ ရှဝေတျစုံဝတျရတဲ့ အကွောငျးကို ဒီလို ရှငျးပွထားပါတယျ။
ရှဝေတျစုံတှဝေတျပွီး မင်ျဂလာဆောငျတဲ့ရညျရှယျခကျြက ရှငျးရှငျးလေးပါ ။ မိဘလုပျငနျးက ရှဆေိုငျဖွဈလို့ အင်ျကြီပျေါမှာ ရှဆေငျဝတျနိုငျတာ မဆနျးပါဘူး ။ ကွှားစရာလညျးမလိုဘူး ။ရှဆေိုတာ ၁ ခါသုံးမှမဟုတျဘဲ ။ ပွနျကြိုပွီး ပစ်စညျးပွနျခကျလို့ရတဲ့ ရတနာပစ်စညျးပါ ။ အဓိကရညျရှယျခကျြက အထူးသဖွငျ့မွို့ပျေါကလူတှကေ ရှဆေိုရငျ နယျကလူတှဝေတျတာ ၊ ဝါဝါဝငျးဝငျးကွီး တောဆနျတယျလို့ပွောကွလှနျးလို့ ရှဆေိုတာ တကယျဖနျတီးဝတျဆငျတတျရငျ ဘယျလောကျထိအောငျ လှပွီးကကျြသရတေိုးစကွေောငျး သကျသပွေတဲ့ရညျရှယျခကျြပါ ။
တကယျတော့ မွနျမာလူမြိုးတှရေဲ့ အသားရကေ ရှနေဲ့အလိုကျဖကျဆုံးပါ ။ ကိုယျ့အသားရောငျတောငျ ရှရေောငျအသားရလေို့တငျစားတတျကွတာမဟုတျလား ? ပွီးတော့ရှဆေိုတာ မွငျနကြေ ဆှဲကွိုးကွီးကွီးတှေ လကျကောကျအကွီးကွီးတှပေဲလုပျဝတျလို့ရတာမဟုတျပါဘူး ။လကျမှု့ပညာထှနျးကားလှတဲ့ ကြှနျမတို့နိုငျငံကပနျးတိမျနဲ့ပနျးပုပညာရှငျတှကေ ရှကေိုအမြားနဲ့မတူ တမူထူးခွားအောငျ အနု့စိတျပုံဖျောနိုငျတယျဆိုတာ ပွသခငျြတာပါ
၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် (၈)လုံးမြောက်မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။